Jery taratra… herinandro: ny asa ihany no mitera-bokatra | NewsMada
Jery taratra… herinandro: ny asa ihany no mitera-bokatra
Nifarana tsy nisy fanalavana ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho solombavambahoaka eny anivon’ny rafitra mpanamarina sy mpandrakitra an-tsoratra ny firotsahan-kofidina (Ovec). Nanome 48 ora hamenoana ny banga ny Ceni.
855 ireo mpirotsa-kofidina amin’izany manerana an’i Madagasikara: 515 no avy amin’ny tsy miankina, ary 340 ny avy amin’ny antoko na vondrona politika. 58 amin’ny 210 ny antoko nanolotra kandidà. Hivoaka amin’ny 19 marsa ny lisitra kandidà ofisialy.
Notanana am-ponja vonjimaika ny olona roa voarohirohy amin’ny fivarotana tanim-panjakana. Tomponandraikitry ny kaominina (CUA) sy avy amin’ny fanajariana ny tany teo aloha izy ireo. Mitohy ny fanahadihadiana fivarotana tany hafa.
Nitsidika ara-pomba ofisialy ny nosy Maorisy ny delegasiona malagasy, tao anatin’ny fankalazana ny faha-51 taon’ny fahaleovantenany. Nitarika izany ny filoha Rajoelina Andry. Nisy ny fifanaraham-piaraha-miasa ara-toekarena tamin’izany.
Nanao fivoriana dinikasa niaraka tamin’ny tomponandraiki-panjakana tany Ambato Boeny, faritra Boeny, ny praiminisitra. Nambarany fa tsy maintsy apetraka ny fandriampahalemana, hamerenana ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny fanjakana.
Nomen’ny CFM famotsoran-keloka ny praiminisitra teo aloha, Andrianarivo Tantely; ny minisitra teo aloha, i Betsimifira Fredo; ny depiote teo aloha, i Zakahely Boniface; ary ny mpanolotsaina teknika teny amin’ny primatiora teo aloha, i Tahaka José Georges.
Nodimandry teo amin’ny faha-81 taony Rakotonirina Manandafy, nanorina ny antoko MFM-MFT, desambra 1972, taorian’ny “Raharaha 13 mey 1972” nirotsahany. Nandalina momba ny toekarena izy, efa mpampianatry ny oniversite, depiote, mpikamban’ny CSR…
Amin’izany rehetra izany, mbola mafimafy sy sarotsarotra ho an’ny vahoaka ifotony ny raharaha: tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ny ady tany etsy sy eroa… Na ahoana na ahoana, ny asa ihany no mitera-bokatra. Na vahoaka, na mpitondra…